မြင့်မြတ်နှင့် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ' Hero ဟီးရိုး' ရုပ်ရှင် မကြာမီ ရ?? - Yangon Media Group
သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်နှင့် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား သည့် ”Hero ဟီးရိုး” Romance အက်ရှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် စတင်ရုံတင်ပြသ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းးဇာတ်ကား၏ Red Carpet Show ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်က သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံတွင် ပြသခဲ့သည်။
ဇာတ်ကားတွင်ပါဝင်ထားသော သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်က ”ဒီဇာတ်ကားက အိန္ဒိယဒါရိုက်တာ ရိုက်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်း ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပထမဇာတ်ကားမှာတော့ ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက် ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို တော်တော် လေးကြိုးစားပြီး သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားကလည်း မကြာခင်ရုံတင်တော့မှာဆိုတော့ ပရိသတ် တွေကို အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
”Hero ဟီးရိုး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအား Lucky7ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကစီစဉ်ပြီး ဒါရိုက်တာ R.Perakas ကရိုက်ကူးကာ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာများအဖြစ် Jakan Manose (Kyaw Kyaw) နှင့် Kamal Haasan၊ ဇော်မြင့်တို့ ပါဝင်ထားပြီး သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် မြင့်မြတ်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ နေနော်တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
နေပြည်တော် သပြေကုန်း အဝိုင်းတွင် ထားရှိမည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးရုပ်အား ငွေကျပ် သ??